အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္တုပတ္တိ ရိုက်ကူးမည် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္တုပတ္တိ ရိုက်ကူးမည်
January 16, 2008, 2:49 am Filed under: News And Activities အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္တုပတ္တိကို ဦးဇာဂနာက ဇတ်ညွှန်းရေးပြီး ဥရောပရုပ်ရှင်သမဂ္ဂက ထုတ်ဝေသူလုပ် ရိုက်ကူးမည့်အစီအစဉ်ကို ကျွန်မ အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ သမိုင်းမှာ မြင့်မြတ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကို ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် တွေ့ကြုံရမယ့် အတိုက်အခံ အခက်ခဲတွေကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပြုမိပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပဲ ပြန်ရှင်သန်လာပြီး သူတို့ကိုသတ်ပစ်တော့မည့်အလား စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စွာ မြန်မာပြည်သူရင်ထဲကနေ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို ဆွဲထုတ်နေပေမယ့် မြန်မာပြည်သူအားလုံးရင်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်သူရဲကောင်းတစ်ဦးပါ။ ဒီအတ္တုပတ္တိဇတ်ကားတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသော ဦးဇာဂနာကို ကျေးဇူးတင် လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေနေရာမှာ ဦးစောနှင့်အပေါင်းပါများနေရာအတွက် ဘလော့ခ်လောကမှာ မျက်စိနောက်စေတဲ့ မျိုးမစစ်အချို့ကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးမည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုချိုးပြီး အော်စကာဆုတွေပါ ရချင်ရသွားနိုင်တဲ့အကြောင်း အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။ စက်တင်ဘာသွေးရေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဦးဇာဂနာနှင့်အင်တာဗျူးမှာ ဦးဇာဂနာက ရွတ်ဆိုပြသွားပါတယ်။ အဲဒီကဗျာလေးကို အရမ်းကြိုက်တာမို့ ဆရာလွဏ်းဆွေဘလော့ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ ချောက်ချား ကြောက်လန့်အောင်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် ဆင်ထားတဲ့ပုံပြင်တပုဒ် မဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့ ပျက်ခဲ့တယ်။
ကြားဖူးနားဝထဲမှာသင်အံဖူးတဲ့အထဲမှာဖြတ်သန်းလာသမျှထဲမှာဒီစာမျက်နှာရဲ့သွေးနံ့တွေက အညှီဆုံးပေါ့ …။
သူတို့ဟာ လူတယောက်ကို လက်ယဉ်ယဉ်နဲ့ သတ်နိုင်ဖို့စနစ်တကျနဲ့ လေ့ကျင့်သင်အံခဲ့ကြတာ၊
သူတို့ဟာ သူတို့အလိုရမ္မက်အတွက်ကိုယ့်သမိုင်းကို တံတွေးနဲ့ ရေးရဲတာ၊
သူတို့က သူတို့ရောက်နေတဲ့ အရပ်ဟာချိုင့်ဝှမ်းမှန်း တောင်တန်းမှန်း မသိနိုင်လောက်အောင်အတ္တတွေ ပိန်းပိန်နေခဲ့တာ၊
သူတို့ဟာ လက်တလုံးခြား လှည့်စားတတ်သလိုမျိုးဗြောင်လိမ်ဖို့လည်း ၀န်မလေးကြဘူး …
သူတို့ဟာ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး လုပ်ဇာတ်ကနိုင်ခဲ့ …။
သားသတ်မုဆိုးရဲ့ ရက်စက်မှုလားအမဲလိုက်ခွေးတွေရဲ့ စိတ်ဆာလောင်မှုလားအရိုးရှင်းဆုံး မေတ္တာတံတားတွေပေါ်မှာစစ်ဖိနပ်သံတွေ ပြင်းထန်သွားခဲ့ပြီ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမဟာမျက်ရည်ယိုဗုံး ပိန်းပိတ်နေတဲ့ကြားမှာနံပါတ်တုတ်နဲ့ ခေါင်းကို အရိုက်မခံခဲ့ရဘူး …သွေးစိမ်းရှင်ရှင်တွေ ဘုရားရဲ့မြေမှာ မစွန်းပေခဲ့ရဘူး။
ဆရာတော် ဦးဝိစာရဟာသေနတ်သံတွေကြားမှာ သင်္ကန်းတဖားဖားနဲ့ မပြေးရရှာဘူးလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး သေနတ်ဒင်နဲ့ အဆောင့်မခံခဲ့ရဘူးဘယ်သူ့လက်ချက်မှန်း မသိဘဲ ရေထဲမှာ အလောင်းမမျောခဲ့ရဘူး။
ဒါဟာ ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူသူတွေရဲ့ လက်အောက်ကျွန်သဘောက် ဖြစ်နေတုန်းကပေါ့…ဒါဟာ တို့သမိုင်းထဲက ရဟန်းအာဇာနည်တွေပေါ့ …။ဒါတွေလည်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့ပျက်ခဲ့တယ် …။
အရိုးသားဆုံး ဓမ္မရှင်တွေဟာဘာအလိုရမ္မက်မှ မပါဘဲဆန္ဒကို ဆန္ဒအတိုင်းရိုးရိုးသားသား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာ …။
အမွန်မြတ်ဆုံး မေတ္တာဓာတ်တွေဟာဘယ်လို ကိုယ်ကျိုးဖက်မှုမှ မပါဘဲသူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှ သူတို့ကယ်တင်ခဲ့ကြတာ …။
အခုမေတ္တာသုတ် ရွတ်သံတွေကို ယမ်းခိုးတွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်လို့ …ရွှေဝါရောင် သင်္ကန်းတွေကို သွေးရောင်လွှမ်းစေခဲ့ကြ …အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို အမဲကောင်တွေလို သဘောထားပြီးရွှေတိဂုံရင်ပြင်ကို လူသတ်ကုန်းလို သဘောထားရဲကြ …
ဒါတွေဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့ ပျက်ခဲ့တယ်။
အခြေအနေတွေကို မျက်လှည့်ပြလိုက်သလိုမျိုးတိတိကျကျ ပြောင်းပြန်လှန်ပြလိုက်နိုင်တဲ့တဖက်ကမ်းခတ်ကလိန်ဉာဏ်များကလည်း လက်ဖျားခါချင်စရာ …မီဒီယာနည်းနားကို မီးကုန်ယမ်းကုန် အသုံးချတတ်ပုံများကလည်း သြချစရာ …သူတို့ဟာ ဟစ်တလာလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လိမ်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟာ နရသူမင်းလိုအာဏာကို ဘာသာနဲ့လည်း လဲရဲတယ် …။
ကြည့်ကြ …!!!ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား ဆိုခဲ့သမျှ …ကို့ရို့ကားယား နိုင်လွန်းလှတဲ့ လက်တွေလေ၊
၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်ပြဖူးတဲ့ လက်ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်ပြဖူးတဲ့ လက်ဆွမ်းဆန်စိမ်းတွေ လောင်းလှူပြခဲ့တဲ့ လက် …ဘုရားထီးတော်ကို မတန်မရာ တင်ပြဖူးတဲ့ လက်
အဲဒီလက်တွေမှာ …ဘယ်သံသရာရောက်ရောက် ဖျက်မရနိုင်တဲ့သွေးတွေနဲ့ …။ ။
မလင်းလက်ရေ…….နောက်ထပ် ၀မ်းသာစရာသတင်းတခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကို ဟောလီးဝုဒ်က နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာတယောက်က ဦးဆောင်ရိုက်မယ်ကြားတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပေါ့။ ဒီဗီဘီ မှာ အဲဒီသတင်းတွေ့လိုက်တယ်။
January 16, 2008 @ 3:38 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI